Skype yeIOS yakagadziridzwa ichatibatsira kukorokotedza zororo reKisimusi | IPhone nhau
Skype yeIOS yakagadziridzwa ichitibatsira kukorokotedza zororo reKisimusi
Skype iko kunyorera, asi sevhisi, iyo inotibvumidza kuti tisangane nechero chikamu chenyika, kungave chemahara, nekufonera mumwe mushandisi kana nekufona kune nharembozha kana nhare mbozha, iko kufona zvine musoro zvine mutengo kuti tinofanira kubhadhara. Kwemakore mashoma ikozvino, Skype yanga iri mumawoko eMicrosoft, iyo anga achiwedzera hutsva hunoshanda kuyedza kukwikwidza nemapuratifomu ekutumira mameseji iyo inotonga mumafoni efoni. Vamwe vacho vanobudirira, zvisinei isu tinowana vamwe vasina nzvimbo muchinangwa chemushandisi wenguva dzose wepuratifomu iyi.
Kunyange Microsoft ichiramba ichiwedzera mashandiro matsva kuitira kuti chishandiso ichi chikwikwidze WhatsApp, Teregiramu, Mutsetse, Viber nevamwe, iyo Skype kunyorera kwemafoni nhare inoenderera ichigamuchira mabasa matsva nenhau. Ikozvino kuvandudzwa kwekushandisa kunotibvumira kurumidza kutumira vhidhiyo meseji kune vedu vadiwa panguva yezororo, nekungodzvanya chorus chorus inoonekwa padyo neiyo Skype logo.
Asi pamusoro pezvo, Microsoft yakatora mukana weiyi yekuvandudza ku gadzirisa nyaya muzviziviso zvepakati penzvimbo, kwavakaunganidza kunyangwe dai taive mukukurukurirana uye zvikaitika kuvandudza kudzoka kwehurukuro yatakasiya nekukanganisa.
Chii chitsva mushanduro 6.30 yeSkype
Paridza mufaro wakawanda mukati memazororo gore rino Goverana vhidhiyo meseji nevako vaunoda panguva yezororo. Tinya pane bhatani rechando padivi peiyo Skype logo kuti utange.
Notifications dzabviswa kubva kuNotification Center painotangisa iyo Skype app kudzivirira kuunganidzwa kwezvinhu.
Wakambovhara iyo app netsaona panguva yeboka rekufona uye ukatadza kuidzokerazve? Iye zvino zvave nyore kujoina zvekare mafoni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Skype yeIOS yakagadziridzwa ichitibatsira kukorokotedza zororo reKisimusi
Sekureva kwaApple, BeatsX nyowani ichave iripo munaFebruary
Apple inogona kuisa $ 1.000M muSoftBank Technology